IMEX waxay ku bilaabaysaa laba maalmood isku xirnaanta barnaamijka BuzzHub
Bogga ugu weyn » Shirka Warka Warshadaha » IMEX waxay ku bilaabaysaa laba maalmood isku xirnaanta barnaamijka BuzzHub
IMEX isku keenida bulshada
Abuuritaanka isku xirnaanta - dhismayaal dheeri ah oo ku teedsan Wadada aadda Mandalay Bay ee IMEX America.
Waxaa jiri doona 2 maalmood oo qaas ah oo ka dhacaya barnaamijka cusub ee khibrada leh ee BuzzHub.
Maalmahan kulanka diiradda lagu saaray waxaa loogu talagalay in lagu dhiso isugeyn iyo cilaaqaad xilli waaxdu u baahan tahay in la isu yimaado oo dib loo dhiso si ka wanaagsan.
Barmaamijka IMEX BuzzHub wuxuu soconayaa illaa Sebtember oo la keenayo isku xirnaanta aadanaha, qiimaha ganacsiga iyo waxyaabaha loo habeeyay.
“Waxaan u qaabeynay oo aan u abuurnay BuzzHub-keena si aan isugu keenno warshadaha iyo beesheena khadka tooska ah iyadoo loo marayo bandhig faneedkeena soo socda, IMEX America bisha Nofembar. Waxaan hadda qarka u saaran nahay inaan ku bixinno laba maalmood oo cusub oo xiriir cusub IMEX BuzzHub waxayna ku socon doonaan labada dhinacba maalinteena Buzz Arbacada soo socota, June 9. ” Carina Bauer, oo ah Maamulaha Guud ee Kooxda IMEX, ayaa soo bandhigaysa laba maalmood oo isku xirnaanta xiriirka ah oo ka dhacaya barxadda cusub ee waayo-aragnimada dalwaddii, BuzzHub.
Isku xirka iyo maalmaha kulanka diirada lagu saarayo ee khadka tooska ah waxay dhacayaan Talaado, Juun 8, iyo Khamiista, Juun 10, labada dhinac ee Maalinta Buzz ee 9ka Juun, waxaana loogu talagalay in lagu dhiso isbarasho iyo xiriiro xilli ay waaxdu u baahan tahay in la isu yimaado dib u dhis fiican. Run Habka IMEX, Qiyaas aad u tiro badan oo shakhsi ahaaneed ayaa loo xiraa maalin kasta iyada oo loo marayo barnaamijka 'AI AI' oo u oggolaanaya dadka inay isku xirmaan iyadoo lagu saleynayo shuruudaha shaqsiyadeed iyo kuwa xirfadeed. Tani waxay awood u siineysaa xiriir aan rasmi ahayn ama ganacsi rasmi ah oo ku saleysan danaha la wadaago oo ka kooban shaqada, xayawaanka, farshaxanka, beerta iyo ciyaarta.
In kasta oo barxadda u oggolaaneyso isku xirnaanta iyo isgaarsiinta inay dhacaan wakhti kasta, waa keliya waqtiyo iyo maalmo cayiman oo kaqeybgalayaashu jadwal ugu sameyn karaan fiidiyaha ama shirarka maqalka ee madasha.
Carina oo sii hadlaysa waxay tidhi: “Waxaan rajaynaynaa inay 'BuzzHubbers' u adeegsan doonaan maalmahan isku xidhka bulshada inay dib ula xidhiidhaan dadkii ay luntay xidhiidhkoodii muddooyinkan u dambeeyay, xilliyadii adkaa iyo sidoo kale inaynu baranno qaar ka mid ah wejiyada cusub ee warshadeenna.